Xeer ilaaliyaha qaranka oo sheegay inay AMISOM kula xisaabtamayaan tacadiyada geystaan – STAR FM SOMALIA
Xeer ilaaliyaha qaranka oo sheegay inay AMISOM kula xisaabtamayaan tacadiyada geystaan
Dr Axmed Cali Daahir, Xeer ilaaliyaha qaranka ayaa ka hadlay tacadiyada ciidamada AMISOM ka geystaan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Axmed Cali Daahir, wuxuu sheegay in ciidamada AMISOM aysan dalka ku joogin si xoog ah, balse ay ku joogaan hishiis dhexmaray dowlada Soomaaliya ururka midowga Africa.
Wuxuuna sheegay in ciidamada ka socdo dalalka kala duwan ee Africa inay kula xisaabtamayaan dhibaatooyinka dalka ay ka geysanayaan.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada AMISOM ciqaabka ugu adag ee ay wajahaan iney tahay iney waayaan shaqada ay ka hayeen dalka Soomaaliya iyo in lagu xukumaa xabsi daa’in.
Ciidamada AMISOM ayaa marar badan tacadiyo kala duwan u geystan shacabka Soomaaliya, waxaana dhibaatada ugu daran ka dhacday Shabeelaha Hoose.
Maalin ka hor ayay aheyd markii ciidamada AMISOM ay haweeney ku dileen magaalada Muqdisho.
Saraakiisha Jubbaland oo sheegay 15 Shabaab inay ku dileen dagaal ka dhacay Jubbada hoose
Labo gabdhood Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Ottawa ee dalka Canada